Mutungamiri weNyika, VaMugabe Vozviti Injanji Chaiyo Kusimba
Chivabvu 19, 2011
Mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe vakati hutano hwavo injanji chaiyo kusimba, sezvo ivo pamwe nemudzimai wavo Amai Grace, vachigara vachiita zvinoita kuti nyama dzavo nemabhonzo zvirambe zvakasimba.
Asi kubva patanga gore rino, VaMugabe nemudzimai wavo vari kugara vachimhanyira kuSingapore nekuMalaysia kunotariswa navanachiremba.
Vachitaura nebepanhau reSouthern Times, iro rakaumbwa neZimbabwe pamwe neNamibia, VaMugabe vakati vane tarisiro yekuti vangangosvitsa makore zana ekurarama.
VaMugabe vakati mushonga wavo kungotevera hurongwa hwekuzvisimbisa hwavakazvitarira, uhwo vakatanga mumakore gumi nerimwe avakagara mujeri munguva yekurwira rusununguko, uye havashandisi michina yekusimbisa muviri iyo vakati vakanga vasina apo vaive vari mujeri.
VaMugabe, avo vava nemakore makumi masere nemanomwe ekuberekwa, vanotiwo vanorwara chete kana vakanga vasina kutamura nyama dzavo.
Mashoko aVaMugabe aya anobuda munguva iyo veruzhinji vari kukurudzira VaMugabe kuti vachisiya chigaro sezvo vakwegura uye hutano hwavo husisaratidziki sehwakanaka.
Svondo rino bato reANC rekuSouth Africa rakati rino shushikana zvikuru nehutano hwaVaMugabe, uye remangwana renyika kana vakamuka vasisipo kana kusiya basa.
Vamwe muZanu PF vanonzi vatotanga kuzviisa pazvinzvimbo zvinozoita kuti vatungamire bato iri kana vamugabe vakabva pachigaro nechimbichimbi.
Nyanzvi mune zvamatongerwo enyika uye vari mudzidzisi paUniversity of Zimbabwe, Professor John Makumbe vaudza Studio 7 kuti mashoko aVamMugabe aya ndeekuyeuchidza vanhu mubato ravo vanonzi vatanga kurwira chigaro chavo, kuti vachasimba zvekutonga.
Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika, VaCharles Mangongera vatiwo kuzvishambadza kwoita VaMugabe uku knogona konekwa senzira yekudzivirira chokwadi chinenge chiripo chekuti vanorwara.
VaPsychology Maziwisa vakurudzira bato reZanu PF kuti richitanga kutsvaga mutungamiri achiri kutemwa dzinobva ropa, uye vati havadi kuona bato reZanu PF richiparara nekufa kana kusiya masimba kwaVaMugabe.
Hurukuro naVaCharles Mangongera Pamwe naVaPsychology Maziwisa